Ny votoatin'ny hafetsen-tsaina sy ny fiantraikany eo amin'ny toerana misy anao - Expert of Semalt, Natalia Khachaturyan
Ny famafàna votoaty dia azo faritana ho toy ny fanangonana votoaty avy amin'ny toerana hafa ao amin'ny aterineto ary famoahana izany ho toy ny asanao manokana ao amin'ny tranonkalanao. Misy tranonkala marobe any izay ahitana ny votoaty amin'ny vohikala hafa. Ny vohikala sasany dia haka lahatsoratra avy amin'ny tranonkala iray hafa ary mamoaka azy ireo ho toy ny asany manokana raha toa kosa ka ny hafa dia mandefa ny tranonkala manontolo.
Izany karazana fitondrantena izany dia manohitra ireo toro lalana napetraky ny Google ary koa ny lalàna momba ny zon'ny mpamorona any Etazonia sy firenena maro hafa. Ny ankamaroan'ny olona mandrehitra votoaty dia mahatsapa fa manao zavatra tsy mety izy ireo. Noho izany raha tsy mino ianao fa mibata votoaty, dia mety tsy izany ianao.
Milaza ny tetikady momba ny Content , Semalt , Natalia Khachaturyan, fa raha te hanala ny votoatiny ianao, dia tsara ny mampiasa fampitandremana rehefa maneho vaovao avy amin'ny tranonkala hafa. Indraindray ny webmasters dia mety manana 'fepetra twitter' na 'fehezam-pejy farany' eo amin'ny sisiny. Tsy voatery ho ratsy izany. Ho an'ny ankamaroan'ny tranga, tsara ny mampiseho zavatra toy izany ao amin'ny faritra misy anao. Na izany aza, raha mampiseho fampahalalana be loatra avy amin'ny loharano maro ianao dia atahorana ho tapaka ny toro-lalana google.
Ity dia mametraka ity fanontaniana manaraka ity, ohatrinona loatra? Tsy misy valiny azo tsoahina amin'io fanadihadiana io, saingy mahafa-po tanteraka fa ny votoaty avy amin'ny loharano hafa dia tsy mila mihoatra ny 10% amin'ny votoatin'ny tranonkala Ny ohatra tsara dia mety ho blaogy mahazatra izay ahitana ny sisintanin'ny filaharana vaovao. Raha toa ka fohy loatra ny lahatsoratry ny blôginao, dia azo inoana fa ny fanidinanao vaovao dia hanana votoaty bebe kokoa noho ny bloganao.
Diniho ny fomba fijerin'ny motera ho an'ity pejy ity. Hamaranana fa ny ankabeazan'ny pejinareo dia feno zavatra tsy tena izy, na votoaty miverimberina toy ny tongotrao sy ny famantarana. Vokatr'izany, ianao ilay tranonkala dia mety tsy heverina ho loharano lehibe ho an'ny lohahevitra momba ny votoaty.
Tsy maintsy fantarinao fa nanonona ohatra sasantsasany momba ny heveriny fa manasitrana ny Google. Ohatra, tranonkala izay manaparitaka sy mamoaka ny votoaty avy amin'ny tranonkala hafa raha tsy ampidiriny amin'ny endriky ny votoatiny na ny lanjany dia heverina ho votoaty ankafizina. Toy izany ihany koa ho an'ny tranonkala izay maka votoaty avy amin'ny tranonkala hafa ary manova azy kely, angamba amin'ny fametrahana azy amin'ny synonyms ary avy eo mamerina azy io. Azony atao koa ny manandrana manova ny votoaty amin'ny fampiasana teknika maoderina toy ny mpilalao lahatsoratra.
Toy izany ihany koa, ny tranonkala sasany dia afaka mamerina mofomamy tsy tapaka avy amin'ny tranokala hafa tsy manome ny mpampiasa azy amin'ny endrika fandaminana na tombontsoa. Ireo no manitsakitsaka ny fitarihana Google ary mety ho voasazy mafy amin'izany.
Tsy mijanona amin'ny votoatiny voasoratra fotsiny ny votoatiny. Izany koa dia azo ampiharina amin'ny votoatin'ny tranokala toy ny sary, lahatsary ary endrika hafa. Amin'ity tranga ity, tranonkala sasany dia afaka mametraka io votoaty avy amin'ny tranonkala hafa io, ary tsy mila ampidirina ao amin'ny mpampiasa. Ity koa dia azo saziana mafy amin'ny alalan'ny karoka fitadiavana. Vao mainka hampalahelo ny fijerinao amin'ny milina fikarohana, fa tsy manampy azy Source .